China Ngalaba Ebube Ebube Ebube 50w China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ngalaba Ebube Ebube Ebube 50w - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ngalaba Ebube Ebube Ebube 50w)
50W wee kpoo oghere ebe ugwu
50W wee kpoo oghere ebe ugwu 1. duru Post kacha elu ọkụ Ịchekwa ikike, gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. 4. Uhie Gburugburu...
ETL Led Light Light Parts 50W 60 Watt
Ìhè Ihu mmiri anyị 50w nwere ike ịmịpụta ihe ruru 6000lm. Ìhè Igwe Ọkụ A Ledere 60 Watt bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Akụkụ a nwere nchekwa nke nwere igwe anaghị agba nzi, nke kwụsiri ike ma bụrụkwa nke ntụkwasị obi, can nwere ike iwunye ihe ịchọrọ. Site na ntulee IP66, anyi na-eji golgulu Kenya...
Ìhè Light Led 50W 6000LM 5000K
Ìhè Light Led 50w anyị nwere ike iwepụta ihe ruru 6000lm na-egbuke egbuke. Nke a Amazon Iju mmiri Ìhè bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Ìhè Ifufe 65 Watt . Ìhè a na-eduga n'ọdọ aka mgbazigharị ọla, nke kwụsiri ike ma bụrụ nke a pụrụ...
Ngalaba Ebube Ebube Ebube 50w Ngalaba Ebube Ebube Ebube 50W Ebube Ebube Ebube 150w Ebube Ebube Ebube Top 50w Ebube Ebube Ebube Top 30w Ebube Ebube Ebube 50W Ebube Ebube Ebube 80w E40 Ebube Ebube Ebube